Jaffar Younnous : Any Tsiafahy, mbola mahavita kidnapping -
AccueilRaharaham-pirenenaJaffar Younnous : Any Tsiafahy, mbola mahavita kidnapping
Jaffar Younnous : Any Tsiafahy, mbola mahavita kidnapping
21/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Jaffar Younnous, karana iray ikoizana amin’ny resaka kidnapping, izay mbola mamita sazy eny Tsiafahy no nahavita sy tao ambadik’ilay raharaha fakana an-keriny ny tompon’ny tranombarotra Caromad etsy Tanjombato. Izy mihitsy no fantatra fa nanome baiko ireo olona rehetra nandray anjara tamin’iny raharaha iny, tamin’ny alalan’ny firesahana tao anaty SMS, ary avy eny amin’ny fonjan’i Tsiafahy no nandefasany izany sms izany. Izy no nanome ny torolalana rehetra tamin’ny fanatanterahana io kidnapping niseho ny 04 Janoary 2017 io. Nanomboka tany amin’ny fanofana ilay “villa” teny Ambohijanaka izay nanafenana an’ilay teratany karana , DG an’ity orinasa caromad ity, ka hatramin’ny andro sy ny fotoana nangalana an-keriny azy. Efa nisy olona enina izay ekipany no voasambotr’ireo zandary avy ao amin’ny sampana mpanao fikarohana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena etsy Fiadanana tamin’iny herinandro iny, taorian’ny fikarohana sy ny fiaraha-miasa tamin’ireo tambazotram-pifandraisana. Nisy tamin’izy ireo no nandray anjara mivantana tamin’ity kidnapping ity, tao kosa ireo niray tsikombakomba tamin’ny fanatanterahana izany.
Mbola misy olona efatra hafa kosa karohina, izay isan’ireo lohandohan’ny mpisorona tamin’izany. Tsy nahatratrarana fitaovam-piadiana ireo lehilahy enina voasambotra ireo, ary tamin’ny fanadihadiana natao azy ireo no nahafantarana fa any amin’ireo efa-dahy mbola tadiavina ny basy nampiasain’ireto jiolahy ireto tamin’ny fotoana nanatanterahana ity asa ratsy ity. Tamin’ny famotorana natao ihany koa no mbola nahalalana fa efa mpamerin-keloka ny efatra tamin’ireto voasambotra ireto, ary tany am-ponja no nifankahafantaran’izy ireo sy ity lehiben’ny mpanao kidnapping ity. Ny volana Desambra 2016 no efa nanomanan’ireto tambazotrana jiolahy ireto ity asa ratsy ity, ary tamin’ny voalohandohan’ny volana Janoary no nanaovan’izy ireo izany. Ny 10 Janoary moa no navotsitr’izy ireo ity teratany karana ity, taorian’ny fifanarahana izay nataon’ny roa tonta. Natolotra ny fampanoavana omaly izy enina ireo, ary niverenana notsaraina ihany koa i Jaffar Younnous noho ity heloka nahavoampanga azy ity indray.
http://gi30.org/nceh2018/forums/index.php?action=profile;u=1366 dans Atsimondrano-BASY KILALAO NANAFIHANA TOKANTRANO
Marko dans Directe al desirabilite de un nov lingua refusa continuar
Voka-pifidianana vonjimaika : Niverina teny amin’ny Ceni ny KMMR
Niverina nitodi-doha teny amin’ny Ceni ny avy amin’ny KMMR, izay miaraka amin’ny Legal Team-n’ny kandidà Marc Ravalomanana. Nametraka taratasy araka ny lalàna fangatahana ny voka-pifidianana sy ny fitanana an-tsoratra isaka ny birao fandatsaham-bato izy ireo ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina Nosy Be : Hiasa ho an’ ny fampandrosoana
Directe al desirabilite de un nov lingua refusa continuar
Mamy Ravatomanga : Manadio tena mafy
Hery Rajaonarimampianina : « Nisy ny fifanarahana matoa tafajoro ny governemanta »
http://gi30.org/nceh2018/forums/index.php?action=profile;u=1366: We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your webb site offered us…
Marko: I've been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of space .…